Apple Music haizopedzisira yasvika kuGoogle Imba | IPhone nhau
Apple Music haizopedzisira yasvika paGoogle Imba
Isu tiri zvizere Mobile World Congress 2019 uye Iwe haugone kuratidzika semusiyano pakati penyaya dzepamutemo nerunyerekupe.
Mamwe mazuva apfuura, un Tweet zvinoita kunge zvinoratidza kuti Apple Music ichave ichiwanikwa kune Google Home zvishandiso kubva kuGoogle, asi pakupedzisira zvinoita sekunge hazvisi muzvirongwa zveGoogle.
Apple iri kutora uzivi hwakavhurika hwekushambadzira kwayo mimhanzi sevhisi, Apple Music, iyo isingawanikwe chete kune mamwe masisitimu anoshanda, senge Android, asi kunyangwe pane zvimwe zvigadzirwa, senge maAmai Echo speaker.
Nekudaro, nechishuwo cheApple chekupa basa rayo uye Mushure mekuona kuti Apple Music yakaonekwa mune rondedzero yemasevhisi anoenderana muGoogle Home app, hazvina kunetsa kune chero munhu kufungidzira kuti runyerekupe urwu nderwechokwadi.
Zvisinei, zvinoita kunge yanga iri runyerekupe rwechinguva uye Google yakaramba chero nhau maererano neApple Music pamidziyo yeGoogle Kumba. Muchokwadi, iwe wabvisa iyo Apple Music sarudzo kubva kuapp.
Ehe saizvozvo, Izvi hazviise mutemo kuti mune ramangwana Apple Music inosvika kumidziyo yeGoogle Kumba. Iko kusvika kwakaratidzika kunge kusingadzivisike mazuva mashoma apfuura kwakangoraswa.
Chimwe chikamu cherunyerekupe chakakonzera nyonganiso chinoreva iyo yatove kuzivikanwa uye inowanikwa Google Mubatsiri sarudzo yekubatanidza neApple Music. Izvo zvinokwanisika, pane chishandiso cheIOS, kushandisa iyo Google Mubatsiri kuburikidza neayo Mubatsiri app kurasikirwa neApple Music mumhanzi.
Iko kuenderana kushoma, nekuti haisi iyo Google mubatsiri anoridza mimhanzi (sezvingaitika paGoogle Imba neSpotify, semuenzaniso) uye Aya ndiwo marondedzero anoita Google kwatiri muapp, "Services neinowanikwa zvishoma".
Kuti ushandise iyi sarudzo, ingori vhura iyo Google Assistant app, tinya pane yako mbiri icon, uyezve pa "Services" uye pa "Music". Pazasi iwe unowana sarudzo yekumisikidza Apple Music.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Apple Music haizopedzisira yasvika paGoogle Imba